रातो ग्रह हाम्रो समझ कायापलट भनेर पाँच मंगल आविष्कारहरू - समाचार नियम
रातो ग्रह हाम्रो समझ कायापलट भनेर पाँच मंगल आविष्कारहरू
शीर्षक यो लेख “रातो ग्रह हाम्रो समझ कायापलट भनेर पाँच मंगल आविष्कारहरू” न्यूयोर्क मा एलन Yuhas द्वारा लेखिएको थियो, बिहीबार 5th नोभेम्बर मा theguardian.com लागि 2015 21.15 UTC
एक रोवर रातो माटो भन्दा trundling संग, वातावरण र काम टोली मार्फत एक अन्तरिक्ष यान डाइविंग पृथ्वी वरिपरि सबै, मंगल अन्तिम वर्षमा नासा गर्न रहस्य एक स्ट्रिङ माथि दिइएको छ. यहाँ को प्रमुख आविष्कारहरू केही छन् 2015.
मंगल मा तरल पानी
दशकहरूमा लागि पछि खोजे, मंगल मा तरल पानी प्रमाण शाब्दिक जुलाई मा ग्रह देखि देखा, canyons र क्रेटरसम्मको पर्खाल तल चलिरहेको यो गर्मी मौसम भन्दा. एक नासा टीम hydrated लवण फेला, तरल पानी लागि एक धूम्रपान बन्दूक, चार साइटहरु मा जहाँ अँध्यारो दाग को Martian भूभाग तल trickled.
नासा अहिले सम्म briny डाउनहिल फ्लो को स्रोत थाहा छैन, भूमिगत बरफ वा aquifers देखि वृद्धि गर्नसक्ने, वा वातावरण बाहिर सानो पार्नु. विगत मिशन पानी सुझावहरूको पाएका छन्, देखा के को तस्बिरहरू सहित हुन सानो प्रवाह र पनि पानी gullies तल घनघोर, पहिलो र तरल प्रमाण पुष्टि रूपमा तर गर्मी खोज भन्दा जीवन संग सम्बन्धित भोपाल थियो.
अनुसन्धानकर्ताहरू लामो तरल पानी जीवनको लागि प्राथमिक घटक छ कि आयोजित छन् - तर वैज्ञानिकहरू अब प्रवाह जांच गर्न कसरी माथि एक दुबिधामा - यो खोज मा नासा गरेको मन्त्र "पानी पालन" छ. तीन वर्षसम्म मंगल खोज्नुभयो छ कि जिज्ञासा रोवर बाँझ छैन, र गीला क्षेत्र मैला पार्नु सक्छ यो विश्व माध्यम अन्तरिक्ष यान मा पछ्याइरहे भनेर स्थलीय बग संग. यो रोवर टाढैबाट जांच सक्छ, एक लेजर संग कि streaks मापन हुनेछ, वा यो केही माटोको माथि scoop गर्न पुग्न जोखिम सक्छ.
सूर्य देखि हावा stripped एक वातावरण
बिहीबार, नासा घोषणा मंगल 'वातावरण बारे निष्कर्ष एक श्रृंखला कि मंगल गर्न के भयो को रहस्य समाधान मदत गर्न सक्छ, वर्ष को जो अरबौं पहिले एक गीला थियो, एक वातावरण संग न्यानो संसारमा 100 पटक मोटा. आज मंगल सुक्खा छ, frigid र विकिरण द्वारा bombarded - पृथ्वी घेरने र सूर्य मा विस्फोट देखि यो सुरक्षा कि बलियो चुम्बकीय क्षेत्र संसार.
नासा गरेको म्यावेन अन्तरिक्ष यान देखि निष्कर्ष, यसको पतली वातावरण जांच गर्न अन्तिम पतन मंगल पुगेको जो, कि रहस्य समाधान गर्न मदत छन्. मिशन वैज्ञानिकहरू कि सौर आँधी फेला, जो बाहिरी विस्फोट ऊर्जा र चुम्बकत्व, एक अविश्वसनीय दर मा मंगल को वातावरण देखि कण दूर strip.
"एक नगद देखि केही सिक्का को चोरी जस्तै हरेक दिन सूची, हानि समय महत्वपूर्ण हुन्छ,"ब्रूस Jakosky भन्नुभयो, म्यावेन गरेको प्रमुख अनुसन्धानकर्ता. सौर आँधी साधारण र सौर प्रणालीको इतिहास मा पहिले तीव्र थिए, सूर्य मा घटनाहरू मंगल को पानी र वातावरण लागि प्रमुख repercussions थियो हुन सक्छ भनेर अर्थ.
मिशन पनि वाइकिंग मिशन देखि पहिलो पटक मंगल 'वातावरण को संरचना मापन 40 धेरै अगाडी, र ग्रह माथि hovering धूलो एक रहस्यमय राशि फेला. शोधकर्ताओं यो interplanetary धूलो हुन सक्छ सुझाव - सौर सिस्टम traversing पुच्छ्रेतारा र क्षुद्रग्रह द्वारा छोडेर यो cosmic अनाज.
अक्टोबर मा, नासा वैज्ञानिकहरू सम्म लामो सक्थे कि पोखरी प्रमाण फेला 10,000 वर्ष - संभवतः लामो पर्याप्त जीवन विकास गर्न लागि खोक्रो प्रवाह र deltas एक दलदली परिदृश्य मा. तलछट विश्लेषण पानी बग्ने वैज्ञानिकहरू देखाए, यो Gigantic Gale क्रेटरसम्मको मा तल रोडा र बालुवा बोक्ने. क्रेटरसम्मको को केन्द्र मा माउन्ट ठिक भनिने towering पर्वतमा खडा, आफैले तलछट तहहरू तीन-किलोमिटर को थुप्रो.
अप्रिल मा, पाइने जिज्ञासा रोवर यो सतह तल तरल पानी प्रमाण मंगल को, र तरल नुनीन लागि बस सही थिए भन्ने Gale क्रेटरसम्मको लिपिबद्ध तापमान. निष्कर्ष Martian माटो एक नुन गर्न तरल धन्यवाद रहन सक्छ कि पानी संग आद्र छ कि सुझाव, क्याल्सियम perchlorate, जो तरल पदार्थ बारे -70C तल यो राख्छ.
म्यावेन वैज्ञानिकहरू पनि सौर हावा मंगल को विशाल swaths भर उत्तरी रोशनी को बराबर सिर्जना भेट्टाए, उच्च-ऊर्जा कारण एक चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा unguarded रोमाञ्चक एक वातावरण कणहरु. मानिसहरूले theoretically रातो रूपमा Martian auroras देख्न सक्थे, दृश्य स्पेक्ट्रम नीलो र हरियो रंग, तर नासा अझै रोशनी जस्तै हेर्न सक्छ के थाहा छैन, यसको rovers उपकरण अभाव देखि तिनीहरूलाई देख्न.
यो auroras पनि मंगल अधिकांश सौर्यहावा द्वारा buffeted छ सुझाव, विचार गर्न प्रमाण उधारो सौर घटनाहरू सबै ग्रह वरिपरि वातावरण को हानि गर्न योगदान कि. केही चुम्बकीय फिल्ड ग्रह वरिपरि छरिएका पाप्रो को वर्गहरु रहन, तर ग्रह यो पटक थियो कि वैश्विक ढाल अभाव.
23468	0 एलन Yuhas, लेख, जिज्ञासा रोवर, मंगल, नासा, समाचार, विज्ञान, स्पेस
← अमेजन आगो HD 10 समीक्षा: गलत कोनों काटन एक महंगा गल्ती प्रमाणित Samsung गियर S2 समीक्षा: सातौं समय कोरियाली दृढ गरेको smartwatch लागि भाग्यशाली →